तथ्यले देखायो १६ वर्ष उमेरकालाई हुने रहेछ यस्तो समस्या - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » तथ्यले देखायो १६ वर्ष उमेरकालाई हुने रहेछ यस्तो समस्या
तथ्यले देखायो १६ वर्ष उमेरकालाई हुने रहेछ यस्तो समस्या
काठमाडौ । १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमा सबैभन्दा बढी मानसिक समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आज सार्वजनिक गर्दै १६ वर्ष उमेरका ७.७ प्रतिशत किशोरकिशोरी बढी मानसिक समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा.प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक समस्या, ०.६ प्रतिशतमा उदासिनता, ३.९ प्रतिशतमा ‘आ’त्म’ह’त्या’को सोच र ०.७ प्रतिशतमा आफ्नो जीवनकालमा ‘आ’त्म’ह’त्या’को प्रयास गरेका पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ०.६ प्रतिशतमा मा’द’क प’दा’र्थलगायत अन्य कुनै प्रकारको न’सा’लु प’दा’र्थको सेवनका कारण मानसिक समस्या आउने गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै वयस्कमा सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशका ५ं.९ प्रतिशत मानसिक समस्यामा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उमेर समूहमा ९४० देखि ४९ ० वर्षका बयस्क ६.३ प्रतिशत मानसिक समस्या र तिमध्ये महिला ५.१ प्रतिशत र पुरुष ३.४ प्रतिशत रहेका छन् ।
सर्वेक्षणमा १० प्रतिशत वयस्कमा आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै समयमा र ४.३ प्रतिशत वयस्कमा हालको अवस्थामा पनि समस्यामा रहेको पाइयो । यस्तै तीन प्रतिशत वयस्क उदासिनताका, ६.५ प्रतिशतमा हालको अवस्थामा आत्महत्याको सोच र १.१ प्रतिशतमा आफ्नो जीवनकालमा ‘आ’त्म’ह’त्या’को प्रयास गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ४.२ प्रतिशत वयस्कमा मा’द’क प’दा’र्थ से’वन गरेका कारण र ०.२ प्रतिशत नसालु पदार्थ सेवन गरेका कारणले मानसिक समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख छ । परिषद्ले सन २०१९ जनवरीदेखि सन् २०२० जनवरीसम्म सातवटै प्रदेशमा १५ हजार ८८ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो । तिमध्ये पाँच हजार ८८८ जना १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका र नौ हजार २०० जना १८ वर्ष माथिका वयस्क थिए ।
तितेकरेला खान जान्नुभयो भने सुगर रोगदेखि ज्वरोसम्म चैट !
युवतीको छाती आकर्षक, टाइट बनाउने यी घरेलु उपाय जान्नुहोस्
दूरविन अर्थात ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट पहिलो पटक शल्यक्रिया